တရုတ်နိုင်ငံတွင် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု, အမြင့်ဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု, tubular electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုထုတ်လုပ်သူ
electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,မြင့်မားသောဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,tubular electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,tube ဝင်ရိုးစွန်းအမျိုးအစား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,,
Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်: 11% - 20% Cert: FAMI-QS, GB, ISO9001, ISO9002 ဖေါ်ပြချက်: electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,မြင့်မားသောဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,tubular electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,tube ဝင်ရိုးစွန်းအမျိုးအစား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု
electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု, မြင့်မားသောဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, tubular electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Diffused မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
XD-II ကိုပေါင်းစုံပြွန်ဆိုင်ကလုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု ပေးသွင်း
electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု၏နိယာမမီးခိုး ionize မှမြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ်လယ်ကွင်းကိုအသုံးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Airflow အတွက်ဖုန်မှုန့်တာဝန်ခံလျှပ်စစ် field ရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်ရှိ Airflow ကနေကွဲကွာနေသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာလျှပ်ကူးပစ္စည်းဥတုလျှပ်ဟုခေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသော Cross-အပိုင်းပုံစံမျိုးစုံနှင့်အတူသတ္တုဝါယာကြိုးများ၏လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
positive လျှပ်ဖုန်မှုန့်လျှပ်စုဆောင်းဟုခေါ်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံ၏သတ္တုပြားများ၏လုပ်နေကြသည်။ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိုကဲ့သို့သောဖုန်မှုန့်အိမ်ခြံမြေ, ပစ္စည်းကိရိယာများဖွဲ့စည်းပုံနှင့် flue ဓာတ်ငွေ့အလျင်အဖြစ်သုံးအချက်များကြောင့်ထိခိုက်နေပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်များ၏တိကျသောခုခံသည့်စီးကူးအကဲဖြတ်ဖို့ညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏ထိရောက်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ ခုခံအားလည်းနိမ့်သည်သောအခါ, ဖုန်မှုန့်အမှုန်သူတို့ကို airstream ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့ဖြစ်စေတဲ့, မြေမှုန့်စုဆောင်းလျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲရှိပါတယ်။ တိကျသောခုခံလည်းမြင့်မားသည်အခါ, မြေမှုန့်စုဆောင်းရောက်ရှိဖုန်မှုန့်အမှုန်များ၏တာဝန်ခံဖြန့်ချိရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ မြေမှုန့်အလွှာအကြားဗို့အား gradient ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပျက်ပြားခြင်းနှင့်ဥတုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဤအခြေအနေများမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား၏ထိရောက်မှုအတွက်လျော့နည်းမှုပါလိမ့်မယ်။
electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု၏အခြေခံနိယာမလျှပ်စစ်မီးအားဖြင့် flue ဓာတ်ငွေ့အတွက်မြေမှုန့်ကိုစုဆောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ငွေ့ (1) သည် .ionizer: ဒါဟာအဓိကအားလေးအပြန်အလှန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များပါဝင်သည်။ (2) ဖုန်မှုန့်များ၏တာဝန်ခံ။ (3) ဖြင့်တရားစွဲဆိုမြေမှုန့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဆီသို့လှုံ့ဆော်ပေး။ (4) ဖြင့်တရားစွဲဆိုဖုန်မှုန့်များ၏ဖမ်းယူ။
တရားစွဲဆိုဖုန်မှုန့်များ၏ဖမ်းယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: အဖြစ်များတတ်သည်၏ကွဲပြားခြားနားသောအချင်းဝက်နှင့်အတူနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောသတ္တု anodes နှင့် cathode အပေါ်တစ်ဦးမြင့်မားသောဗို့အားတိုက်ရိုက်လက်ရှိဓာတ်ငွေ့ ionize ဖို့လုံလောက်တဲ့လျှပ်စစ်လယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အသုံးပြုသည်။ မြေမှုန့်စွဲချက်တင်ခံရနိုင်အောင်ဓာတ်ငွေ့များသည် .ionizer, အ anion နှင့်စုံလုံကထုတ်လုပ်အဆိုပါအီလက်ထရွန်, လျှပ်စစ်လယ်ပြင်ကနေတဆင့်ဖုန်မှုန့်ပေါ်စုပ်ယူနိုင်ပါသည်နေကြသည်။ ဖုန်မှုန့်နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၏ခွဲခြာ၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်သကဲ့သို့, လျှပ်စစ်လယ်ကိုအင်အားသုံး၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအရ, ကွဲပြားခြားနားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိနှင့်အတူလျှပ်ကွဲပြားခြားနားသော polarity က၏လျှပ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအပေါ်အပ်နှံ။
အခြားအ dedusting ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့်မြင့်မားသောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ flue ဓာတ်ငွေ့အတွက် 0.01 ကနေ 50 မီတာမှမြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားဘို့သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့်ဖိအားအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလေ့အကျင့်ဟာပိုမိုကြီးမားသည့် flue ဓာတ်ငွေ့အသံအတိုးအကျယ် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု၏ပိုပြီးချွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စစ်ဆင်ရေးကုန်ကျစရိတ်လိမ့်မည်, ကြောင်းကို။ ပြသ
ကျယ်ပြန့်အကွာနှင့်အတူအလျားလိုက် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု၏နည်းပညာ
အဆိုပါ HHD type ကိုကျယ်ပြန့်အကွာအလျားလိုက် electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုဟာ ပို. ပို. တင်းကြပ်ထုတ်လွှတ်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်အလို့ငှာနှင့်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံ, အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများတွင်စက်မှုဇုန်မီးဖိုထဲအိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့အခြေအနေများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူပေါင်းစပ်, နိုင်ငံခြားအဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုမိတ်ဆက်နှင့်ရည်ညွှန်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့စျေးကွက်စံချိန်စံညွှန်းများ။ ရလဒ်ကျယ်ပြန့်သတ္တုဗေဒ, ပါဝါ, ဘိလပ်မြေနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အားလုံးဟာ Optimum ကျယ်ပြန့်အကွာနှင့်အထူးပန်းကန် configuration များ
အဆိုပါလျှပ်စစ်လယ်ကွင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ပန်းကန်လက်ရှိဖြန့်ဖြူးပိုပြီးယူနီဖောင်းဖြစ်ကြသည် drive ကိုမြန်နှုန်း 1.3 ဆတိုးလာနိုင်ပါသည်, ထိုထောင်ချောက်ဖုန်မှုန့်ခုခံ၏အကွာအဝေးအတွင်း 101-1014 -cm တိုးချဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေါ် vulcanized အိပ်ရာဘွိုင်လာ၏စွန့်ပစ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့, သစ်ကိုဘိလပ်မြေခြောက်သွေ့တဲ့ rotary လညျးမီးဖိုနှင့် sintering စက်နှင့်၏မြင့်ခုခံဖုန်မှုန့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သည် ဖြစ်. , ပြောင်းပြန် Corona ဖြစ်ရပ်ဆန်းကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်။
အသစ်သည် RS Corona လိုင်း
အထိ 15 မီတာအမြင့်ဆုံးအရှည်, အနိမ့်အိမ်ဖွဲ့ဗို့အားနှင့်အတူ, အကျိုးသက်ရောက်မှုသန့်ရှင်းရေးပေါက်ကွဲမှု၏ထိပ် mode ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ် Corona လက်ရှိသိပ်သည်းဆအားသံမဏိ, ဘယ်တော့မှမမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ခုခံနှင့်အတူကျိုး, အပူပြောင်းလဲမှုကိုခုခံ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်မှုန့်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအရ, Corona ဝါယာကြိုးသိပ်သည်းဆမြင့်မားဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တွေ့ဆုံရန် configured နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးခွင့်ပြုသည့်ဝင်ပေါက်အာရုံစူးစိုက်မှု 1000g / nm3ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
Corona တိုင်ထိပ်ကို vibrator
ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေး၏သီအိုရီအရ, ထိပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းခိုင်မာတဲ့တုန်ခါမှုနှင့်အတူ vibrated နိုင်ပါသည်။ စက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်နှစျယောကျ optional ကိုနညျးလမျးမြားမွေးစားနိုင်ပါတယ်။
မြေမှုန့်စုဆောင်းနှင့် HHD လျှပ်စစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအသုံးပြုမှု Corona system ကိုသုံးဖက်မြင်ရပ်ဆိုင်းမှုဖွဲ့စည်းပုံမှာ။ အဆိုပါအိတ်ဇောဓာတ်ငွေ့အပူချိန်များလွန်းမြင့်မားသည်အခါ, မြေမှုန့်စုဆောင်းနှင့် Corona တိုင်သုံးရှုထောင်ဦးတည်ချက်အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုချဲ့ထွင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစုဆောင်းသည့်စနစ်ကိုလည်းအထူး HHD လျှပ်စစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအပူပြောင်းလဲမှုနှင့်စီးပွားဖြစ်စစ်ဆင်ရေးစားပွဲပေါ်မှာဖို့ပိုမိုမြင့်မားခုခံရှိစေသည်ဖြစ်သောအပူခံနိုင်ရည်သံမဏိခါးပတ်၏ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း။ ဒါဟာ HHD လျှပ်စစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းအများဆုံးအပူချိန်ခုခံ 390 ဒီဂရီ C တို့မှတက်ကြောင်းရှင်းပါတယ်
ဖုန်မှုန့်သန့်ရှင်းရေး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်လာသောဖြစ်ပါသည်: မြေမှုန့်စုဆောင်းသည့်စနစ်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး၏ထိရောက်မှုအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်စုဆောင်းအများစုဟာအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအပြီးထိရောက်မှုအတွက်ကျဆင်းမှုပြသထားတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမြေမှုန့်ကောက်ခံရေးပန်းကန်၏ဆင်းရဲသားကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ အဆိုပါ HHD လျှပ်စစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းရိုးရာအပြားသံမဏိသက်ရောက်မှုလှံတံကိုထုံးပြောင်းဖို့နောက်ဆုံးပေါ်သက်ရောက်မှုသီအိုရီများနှင့်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းရလာဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာတစ်ဖွဲ့လုံးသံမဏိဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ဆောက်လုပ်ထားသည်, မြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဘေးထွက် vibrator ၏ဖွဲ့စည်းပုံမှာ 2/3 အားဖြင့်တစ်စက်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုမြေမှုန့်စုဆောင်း၏မျက်နှာပြင်၏နိမ့်ဆုံးအရှိန် 356G မှ 220G ကနေတိုးပွားလာကြောင်းပြသထားတယ်။
ရိနာစွဲလျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်ကထိပ်တန်း vibrator ကဒီဇိုင်းသည်နှင့် unsymmetrical ရပ်ဆိုင်းမှုဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီလျှပ်စစ်ကိုလယ်များအတွက်ဖန်တီးမှုကိုအသုံးပြုသည်ကို၎င်း, shell ကိုကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲဒီဇိုင်းအမေရိကန်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပစ္စည်းကိရိယာများကုမ္ပဏီက optimized သည်လျှပ်စစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏စုစုပေါင်းအရှည်အဖြစ် 3-5 မီတာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်နှင့်အလေးချိန် 15% လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မားသောအာမခံချက် insulator တွင်လည်းစနစ်က
dewing နှင့်တောင်တက်ထံမှ electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု၏မြင့်ဗို့အားလျှပ်ကာပစ္စည်းကာကွယ်တားဆီးဖို့အမိန့်မှာ shell ကိုအပူသိုလှောင်မှုနှစ်ဆငွေခေါင်မိုးကဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလျှပ်စစ်အပူပေးနောက်ဆုံးပေါ် PTC နှင့်မှတ်ပစ္စည်းများချမှတ်လျက်, insulator တွင်လည်းထည်၏အောက်ဆုံးလုံးဝကြွေထည်နှင်း၏လွယ်ကူသောပျက်ကွက်ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တွားတတ်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးဖြစ်သောခြဲ့ကားပွောပြန်မှုတ်ဒီဇိုင်းကဒီဇိုင်း, နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အစားထိုးအလွန်အဆင်ပြေများမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုက်ညီ LC မြင့်မားမှုစနစ်
မြင့်မားသောဗို့အားကိုထိန်းချုပ် PLC ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြု. DSC စနစ်, အထက်ကွန်ပျူတာစစ်ဆင်ရေးအနိမ့်ဗို့အားကိုထိန်းချုပ်ကထိန်းချုပ်ထားနှင့်တရုတ်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ခွဲစိတ်နိုင်ပါသည်။ အမြင့်ဆုံးသောဗို့အား power supply ဟာ HHD electrostatic မိုးရွာသွန်းမှုခန္ဓာကိုယ်ကိုက်ညီဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်လက်ရှိနှင့်မြင့်မားသော impedance DC ကအာဏာကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုမြင့်မားတိကျတဲ့ခုခံနှင့်မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှု၏အားသာချက်များရှိပါသည်။
Related Products List: electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု , မြင့်မားသောဖိအား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု , tubular electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု , tube ဝင်ရိုးစွန်းအမျိုးအစား electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု , စက်မှု electrostatic မိုးရွာသွန်းမှု